Home Wararka Ganacsato malaayiin doolar ku waayday dabkii xalay ka dhacay Hargeysa
Ganacsato malaayiin doolar ku waayday dabkii xalay ka dhacay Hargeysa
Waxaa xalay Suuqa Waaheen ee kuyaala magaalada Hargeysa ka kacay dab xooggan oo geestay khasaaro badan oo hantiyadeed, waxaana dabkan lagu guul dareestay in si degdeg ah loo damiyo.
Dabka ayaa ku faafay qeybo badan oo kamid ah suuqa Waaheen, waxaana gaadiidka dabdamiska ku adkaatay in ay gaaraan goobaha ganacsi qaar uu dabku qabsatay taa oo keentay in dabka kusii faafo goobo kale oo hor leh.
Khasaaro malaayiin dollar ah ayaa ka dhashay dabka xalay qabsaday suuqa waaheen, waxaana dabkaasi ku ceertoobay ganacsato badan oo halkaasi ku lahaa mehrado ganacsi kuwaa oo saakay ka fara maran hantidii ay lahaayeen.
Ganacsade Baashe Bushaaro waxa uu kamid ahaa ganacsatada ku ceertoowday dabka ka kacay suuqa Waaheen, waxaana ganacsadahan ka gubtay dhammaan 10-dukaan uu ku lahaa gudaha Suuqa .
Baashe Bushaare ayaa warbaahinta u sheegay in dabka ka kacay suuqa magaalada Hargeysa uu ku waayay aduun lacageed oo ka badan $400,000(Afar boqol oo kun oo Doollar), waxa uuna ku eedeeyay dowladda hoose in ay ku fashilantay daminta dabka.
Waxa uu ku eedeeyay ganacsadaha in duqa magaalada Hargeysa iyo madaxda kale ee dowladdaha hoose dhoor mar loo geeyay cabasho la xariirta in suuqa waddooyin loo bixiyo si u sahlanaato hadii dab kaco in durba la damiyo.
“Khasaaraha waa mid baaxad weyn, waana wax Qadar alleku kacay iyo dedaal xumo weyn uu sameeyay Maayirka oo u taak heli waayay oo waxaa la waayay meel laga galo & meel laga baxo, waxa aan ku lahaa 10 Meherad oo dhammaan gubtay waxa saameyn gaar ii ah lacag qiyaastii $400,000, alle ayaan weydiisaneynaa Caawinaad” ayuu Yiri Ganacsade Baashe Bushaaro.
Suuqa magaalada Hargeysa ayaa maanta la galiyay xaalad bandow ah, waxaana ka howlgalaya kaliya ciidamada ammaanka iyo kuwa dabdamiska, maamulka magaalada Hargeysa ayaana sheegay in la xiri doono qofkii suuqa saakay lagu arko.
Previous articleDowladda Turkiga oo taageertay Hawlgalka ATMIS ee Soomaaliya
Next articleGanacsato: “Toban maheradood ayaa igaga gubtay suuqa” ( Sawiro Suuqa Waaheen)
Mareykanka oo War Cad kasoo saaray khilaafka Doorashada Somaliya iyo Farriin...
(Sawiro) Sii hayaha xafiiska RW oo magacaabay guddi qaban qaabada xil...